Thwebula TweetDeck 3.8.4 – Vessoft
TweetDeck – isofthiwe ukusebenza othandwayo amanethiwekhi omphakathi. TweetDeck inikeza ukufinyelela ulwazi edingekayo zokuxhumana zenhlalo kakhulu futhi inezici ukuxhumana nabangani, ukubuka okuqukethwe kwabezindaba, ukulandelela izindaba, sokubhala izithombe njll Isofthiwe kwenza ukuba kanyekanye ukusebenza nge-akhawunti amaningi e-Twitter kanye isekela ukuvumelanisa namadivaysi ezahlukene. TweetDeck ikuvumela ukuba usebenzise Tweets elidala noma luhlobo lolusha, ukucacisa indawo abangani uthole izaziso umsindo imiyalezo emisha. TweetDeck Ubuye interface nezimo okungase ahlukaniselwe nezinsika ezahlukene ukufeza wokuhlola best.
Usekela ethandwayo amanethiwekhi omphakathi
Isethi Great ukusebenza
Updates ulwazi real-time
Ukungabikho ogaxekile nokukhangisa
Amazwana on TweetDeck:
TweetDeck Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... QQ 2.11 International futhi 6.4.12593 Standard
English, Español, 中文, 日本語... Ares 3.1.9.4045 futhi 2.4.4
Abadlali Media Umdlali Amatebhe ngokusekelwa ethandwa abezindaba amafomethi. Isofthiwe inikeza sokudlala eliphezulu amafayela abezindaba kanye nomsebenzi ne engezansi.
English, Afrikaans, Українська, Français... Recuva 1.53.1087 Standard futhi Portable